Famoronana tantara momba ny orinasa Delta Engineering
Mianara bebe kokoa momba anay sy ny orinasa
Fototry ny orinasa
Ny Delta Engineering dia naorin'i Danny De Bruyn sy Rudy Lemeire tamin'ny 1992, samy mazoto miasa amin'ny famokarana tavoahangy plastika izy ireo.
Raha tsikaritr'izy ireo ny tsy fahampian'ny fitaovana fanaraha-maso mahomby dia nanomboka namolavola sy namokatra ny UDK100, tester leak tokana.
Tao anatin'ireo volana sy taona vitsivitsy dia nijanona be dia be tamin'ny filan'ny mpanjifany izy ireo, nitarika haingana ny fampivoarana vahaolana marobe hamahana ny tena olana ny orinasa ankehitriny.
Ity fomba fiasa ity dia nahafahan'ny Delta Engineering nametraka toerana malaza teo amin'ny orinasa. Ankehitriny ny Delta Engineering dia manisa vondrona maro an'isa iray, ary koa orinasa vitsy an'isa amin'ny mpanjifany.
Manatsara ny fahombiazanao izahay
Manome ny hatsaranao izahay
Anjarantsika ny mamolavola vahaolana ilaina hahafahan'ny mpanjifanay mampiavaka ny hafa. Ny fizotran'ny mpanjifanay, ny asa, ny fonosana ary ny vidin'ny fitaterana no anjaran'ny KPI rehefa mamolavola milina sy vahaolana vaovao.
Ahoana no ahalalantsika ny vokatra vokarintsika? Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky aminao, ny mpanjifa: ny valinteninao manan-danja dia ahafahanao manamboatra sy manatsara ny vokatra. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fahombiazantsika: ny olona ao amin'ny orinasam-pifandraisana sy ny tanjon-dry zareo hamorona. Ny tanjonay dia ny hahatratra ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fahombiazana amin'ny famolavolana vahaolana avo lenta, lafo vidy, famatsiana ary fametrahana ary aorian'ny varotra sup-port. Amin'ny alàlan'ny kolontsaintsika, ny fiara sy ny fahaizan'ny mpiasa tsirairay, dia misy toerana tokana ahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifantsika maneran-tany.